ANTSIRABE Hikatona tanteraka ireo tsena lehibe anio
Ho fiarovana ny amin’ny mety ho fiparitahan’ny tsimok’aretina “coronavirus” dia hitakona tanteraka ny tsena ao Sabotsy Antsirabe sy ao antsenakely anio Talata 31 Martsa. Noho ny asa fanadiovana sy fanondrahana ranom-panafody hataon’ny mpiasan’ny fahasalamana any an-toerana no anton’izany.
Aorian’ny anio Talata dia tapak’andro ihany sisa no afaka mandray mpividy ny tsena tsirairay avy ka natokana ihany koa ny lalana hidirana sy hivoahana ao an-toerana. Avy any amin’ny vavahady atsimo sy avaratra ohatra no miditra ny rehetra raha tsy maintsy any amin’ny vavahady andrefana sy atsinanana kosa no mivoaka. Nampidirina ho ao anatin’ny vata fandrenesam-peo manatanteraka ilay fandaharana miara-manonja isan’andro ihany koa ireo vata fandrenesam-peo sy fahita lavaitra any an-toerana hahafahana manaraka ny fivoaran’ilay aretina coronavirus izay mitady hahazo vahana eto amintsika. Tsiahivina moa fa noho ny fisian’ilay tera-tany vahiny iray nitondra ny tsimok’aretina coronavirus nandalo tany an-toerana no antony tsy maintsy handraisana izao fepetra izao ka ankoatra ny olon-tsotra dia voakasika avokoa ireo mpiasan’ny hôtely fandraisam-bahiny maro isan-tsokajiny. Mikasika ireo posy sy cyclo posy ary bajaj fitaovam-pitaterana hany sisa miasa any an-toerana dia fantatra fa tsy mahazo mitondra afa-tsy iray isanisany izy ireo sisa.